Munamato weRopafadzo wezuva. ? Gamuchira marudzi ese emaropafadzo
Munamato wekuropafadza inofanira kugara irimumuromo medu nekuti narwo tinogona kusimudzira sedanga rakatikomberedza panowanikwa zvinhu zvakanaka izvo zvinogona kupinda.
Izwi raMwari rinotsanangura kwatiri kuti makomborero aMwari haawedzere chero kusuwa uye ichi chinhu chakakosha kuitira kuti uzive kuti ndeapi makomborero anobva kuna Mwari uye asiri iwo. Mune ino nyaya nekuita iyi minamato minamato tinogona kuonga, kuzvikomborera isu pachedu kana mumwe munhu uye nekuziva simba raMwari muhupenyu hwedu.
1 Munamato wekuropafadza
2 1) Munamato wekugamuchira mhando dzemakomborero ese
3 2) Munamato wekukomborera kwezuva
4 3) Minamato yezvikomborero zvaMwari
5 4) Munamato wekutenda Mwari pamusoro pemakomborero ese
5.1 Munamato wekukomborera une simba here?
Zvikomborero zvikomborero isu tese zvatinoda kana kuda kugashira nguva dzese muhupenyu hwedu.
Nguva zhinji tinovagamuchira vega uye kunyangwe tisingazvizive uye dzimwe nguva tinofanirwa kukumbira kana kuvarwira .. Mupfungwa idzi, munamato wekuropafadza unova chombo chine simba chatinogona kushandisa nguva dzese.
1) Munamato wekugamuchira mhando dzemakomborero ese
Ndinokumbira kuti mundiropafadze,
rumbidzai zvese zvinobata namaoko angu nhasi,
Komborerai basa rangu zvakare uye mundibatsire kuzviita nemazvo, kwete kukanganisa.
Komborerai vese vandinoshanda navo;
Baba ropafadzai mumwe nemumwe wemifungo yangu nemanzwiro,
kuti urege kufunga kana kunzwa zvakaipa,
zvekuti zvese zviri mukati mangu rudo chete;
rumbidzai rimwe nerimwe remashoko angu,
Kwete kutaura zvinhu zvandinogona kuzodemba gare gare.
Komborerai sekondi yega yehupenyu hwangu,
kuti nazvo nacho nditore mufananidzo wako uye neshoko kune vese vanorida.
Ndiropafadzei, Ishe, kuti ndive mumufananidzo nomufananidzo wangu.
kuunza zvinhu zvakanaka kuvanhu vese
zvakandikomberedza uye zvekuti vese varopafadzwe nemwi.
Ini ndinokumbira kuti munhu wese mumoyo mangu arumbidzwe nemi.
iwoMweya Mutsvene neMhandara;
Zvikomborero murudo, hutano, iyo mari, mhuri, shanda, bhizinesi, yemhuri yemhuri, yevana uye kunyange kubuda imba yedu zuva rega rega, makomborero anodiwa munzvimbo dzese dzehupenyu hwedu.
Izvo zvakakosha kuti tizive nzira yekumisikidza mhuri kana yega nheyo yekuita munamato uyu zuva nezuva kana kana kamwe chete pasvondo. Tinogona zvakare kuzvidzidzisa kuvana vedu uye mhuri uye nenzira iyi kusimbisa kutenda kwemhuri pamwe nekushandisa nguva yakanaka navo.
2) Munamato wekukomborera kwezuva
Baba vane masimba ose,
Ndinokutendai nekuda kwezuva idzva iri,
Kubva pakuzvarwa kwezuva, nekumuka kwangu uye nekufamba kwangu kwaari,
Ndine mukana wekuva padyo newe, kuve nani server kupfuura zvandaive zuro.
Ndatenda nekuda kwemhuri yamakandiisa mukati,
Shamwari dzangu dzinonditungamira nezvakanaka
uye zvese zvinotungamira munzira inoenda kwauri, zvinomiririra chimwe chinhu chakajeka muhupenyu hwangu.
Rumbidzai noMweya Mutsvene, Ishe,
yega yega nhanho dzangu, kuti uve muenzaniso wemoyo wako wakanaka
kune vese avo vanowana vari munzira.
rurimi rwangu, miromo yangu nenzwi rangu,
kuitira kuti ivo vadziviri veshoko renyu uye vatapure mariri.
Nyungurisai ropa renyu dzvene mumaoko angu, Ishe,
Ngavazadziswe nokuteerera kwemwari, Kuti basa rangu rikomborerwe.
Dai uri mufaro wako unobata mwoyo wangu, uye zvakasikwa kuti uzive kuti ndiri muranda wako akatendeka,
uye nenzira iyoyo ive chishandiso cherunyararo hwako.
Ndinoisa mumaoko ako zvese zvandiri nhasi nezvandichava
kuti undiumbire kumufananidzo wako nezvaunoda,
nenzira yokufanana newe, nekuda kwevanhu vako,
uye kuti zita renyu rikudzwe pese paanoyambuka.
Ini ndinokumbira izvi muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene.
Munamato wekuropafadzwa kwezuva unongova unoshamisa.
La kukomborera kwezuva ndechimwe chinhu chatinofanira kurwira zuva nezuva. Nechepfungwa, zviite mangwanani kuitira kuti zuva rose riropafadzwe. Vamwe vanhu vanowanzovhenekera kenduru yakakosha kuti vaite munamato uyu, zvisinei zvinogona kuitwa chero nguva nenzvimbo.
Muenzaniso wemunamato waBaba Vedu uyo ​​watinoona mubhaibheri unotidzidzisa kuti isu tinofanirwa kukumbira chingwa chedu zuva rega rega uye kuti chingwa chinofanidzirawo maropafadzo ese atinogona kukumbira kana kunyange iwo ayo atisingazive chatiri kuda asi icho Ishe vanoziva.
3) Minamato yezvikomborero zvaMwari
"Ndinoonga Mwari nekundipa chikomborero chekuve nerimwe zuva,
Ndatenda nekuti nhasi ini ndinogona kuona zvakare kukura kwazvo kwechisikwa chako uye nerudo.
Nhasi, ndiri munhu anofara,
rombo rakanaka uye nekutenda kuve nemukana mutsva wekutora zuva rizere nerunyararo,
Rudo, dziviriro uye kunyanya kukosha, mutungamiriri wako.
Ishe ndipeiwo simba kuti ndikunde zvipinganidzo zvese zvinopinda munzira yangu,
Ndishingei, musimbe seni.
Ita kuti rudo rwako rwufukidze hupenyu hwangu hwese uye nevaya vese vandikomba uye vari munzira yangu.
Zuva rega rega rinotanga ini ndinonamata kuti munditeerere uye mupindure nerupo rwenyu rukuru uye nemutsa.
Ndinoziva kuti mweya wangu unokuda iwe zuva nezuva, uye unondipa makomborero ese.
Kukwanisa kusimudza munamato wekuropafadza kubva kuna Mwari uye kurumbidza zita raMwari uye kumukumbira kutikomborera kunofanirwa kuve rimwe rematanho atinotora muminamato yedu yekuzvipira.
Makomborero aMwari anotanga kugashirwa munzvimbo yemweya uyezve mumuviri Ndiyo nzira yatinofanira kurwira izvo zvatiri kuda kuwana uye izvo mune zvemweya chete zvatingakwanise kuwana.
4) Munamato wekutenda Mwari pamusoro pemakomborero ese
Kuonga kwakakosha kukosha kuti nenguva pamwe nekutarisira muzambiringa unoita sekunge warasika asi ishe wakanaka mushoko rake rinotiudza kuti tinofanirwa kutenda.
Pane nyaya yechimwe chezvishamiso zvaJesu paakarapa vane maperembudzi uye mumwe chete akadzoka kuzotenda, vamwe vakangoenda kunonakidzwa nehupenyu vaine hutano hwakanaka, izvi zvinotidzidzisa kuti tingaonga sei gumi chete ndiye achadzoka, izvo zvingave isu, garai muchifunga nguva yekutenda Mwari nekuda kwemakomborero atiri kugamuchira kubva kwaari.
Kungovhura maziso edu kune zuva idzva, kufema uye kuva nemhuri yedu, zvinhu zvidiki izvo kakawanda zvatinokanganwa kutenda Mwari. Ngatidzidzei kuonga uye kusimudza munamato wekutenda zuva nezuva nekuda kwemaropafadzo ese atakawana
Munamato wekukomborera une simba here?
Munamato une simba ndewe izvo zvinoitwa nekutenda nekuti ndizvo zvoga zvinodikanwa kuti minamato yedu Inzwa.
Kana tikabvunza nekusava nechokwadi kana noudyire, tisingatendi kuti Ishe vanogona kutipa izvo zvatiri kukumbira, iwo munyengetero usinawo uyo usingazadzise chinangwa chawo. Pasina kutenda hazvigoneke kufadza Mwari, dzidziso ine mbiri iri mubhaibheri yatinofanira kugara tichiyeuka.
Unogara uine kutenda kwakawanda uchinamata munamato wekuropafadza zuva kuna Mwari uye nekugamuchira marudzi ese emaropafadzo.
Simba munamato weropa raKristu